Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - Waxa aad akhrineyso xiga
Horudhac (qaybta 5.1)
Iskaashiga dad weynuhu wuxuu isku daraa fikradaha ka soo baxa sayniska muwaadiniinta , ra'yiga , iyo sirdoonka wadajirka ah Sayniska Muwaadiniinta ayaa sida caadiga ah macnaheedu yahay "ku lug leh muwaadiniinta" (ie, kuwa aan khabiir ku jirin) ee nidaamka sayniska; Wixii dheeraad ah, fiiri Crain, Cooper, and Dickinson (2014) iyo Bonney et al. (2014) . Cunto-celinta badanaa waxaa loola jeedaa in dhibaatada si caadi ah loo xalliyo hay'ad dhexdeeda oo ay ka noqoto in ay dad badan u adeegsadaan dad badan; Wixii dheeraad ah, fiiri Howe (2009) . Aqoon isweydaarsi caadi ahaan ah macnaheedu waa kooxo shakhsi ah oo si wada jir ah u wadaagaya siyaabo u muuqda caqli; Faahfaahin dheeraad ah, fiiri Malone and Bernstein (2015) . Nielsen (2012) waa hordhac ballaadhan oo la xidhiidha awooda wada-shaqayneed ee cilmi-baarista.
Waxaa jira noocyo badan oo wada shaqeeyn ballaaran oo aan ku habbooneyn saddexda qaybood ee aan soo jeediyay, waxaana u maleynayaa in saddex ka mid ahi ay uqalmiyaan dareen gaar ah sababtoo ah waxay noqon karaan kuwo waxtar u leh cilmibaarista bulshada. Mid ka mid ah tusaale ahaan suuqyada saadaasha, halkaasoo kaqaybgalayaashu ay iibsadaan iyo heshiisyada ganacsi ee dib u furan ee ku saleysan natiijooyinka ka dhaca adduunka. Saadaalinta suuqyada ayaa badanaa loo adeegsadaa shirkadaha iyo dawladaha si ay u saadaaliyaan, waxaana sidoo kale loo adeegsaday cilmi-baarayaal bulsheed si loo saadaaliyo dib-u-kicinta daraasaadka cilmi-nafsiga ee cilmi-nafsiga (Dreber et al. 2015) . Wixii guud ee suuqyada saadaasha ah, fiiri Wolfers and Zitzewitz (2004) iyo Arrow et al. (2008) .
Tusaale labaad oo aan si fiican ugu habboonayn nidaamkayaga qowmiyadeed waa mashruuca PolyMath, halkaas oo cilmi-baarayaashu ay ka wada shaqeeyeen isticmaalka blogs iyo wikis si loo caddeeyo aragtiyada cusub ee xisaabta. Mashruuca PolyMath waa siyaabo kala duwan oo la mid ah Netflix Prize, laakiin ka qaybgalayaasha mashruuca ayaa si firfircoon loogu dhisaa xalalka qaybaha dadka kale. Wixii dheeraad ah ee mashruuca PolyMath, fiiri Gowers and Nielsen (2009) , Cranshaw and Kittur (2011) , Nielsen (2012) , iyo Kloumann et al. (2016) .
Tusaale saddexaad oo aan si fiican ugu habboonayn nidaamkayaga qoondaynta ayaa ah in ay socdaan wacyi-gelinta wakhtiga ku-saleysan sida Hay'adda Horumarinta Cilmi-baarista Hormarinta ee DARPA (DARPA) Network Challenge (ie, Challenge Red Balloon). Wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan dhacdooyinkan xasaasiga ah fiiri Pickard et al. (2011) , Tang et al. (2011) , iyo Rutherford et al. (2013) .
Xisaabinta dadka (qaybta 5.2)
Ereyga "xisaabinta aadanaha" waxay ka timaadaa shaqada ay sameeyeen saynisyahannada kombuyuutarka, iyo fahamka macnaha ka dambeeya cilmi-baaristan waxay hagaajin doontaa awooddaada inaad ku soo qaadato dhibaatooyinka ku habboon. Shaqooyinka qaarkood, kombiyuutaradu waa kuwo aad u awood badan, awooddana waxay ka badan yihiin kuwa xitaa khabiirada xitaa. Tusaale ahaan, maadada chess, kombiyuutarada ayaa garaaci kara xitaa dadka waaweyn ee waaweyn. Laakiin -waxaanu si fiican u qadarin saynisyahanno bulsheed - hawlaha kale, kombiyuutarku dhab ahaantii wuu ka sii xun yahay dadka. Si kale hadii loo dhigo, hada waxaad ka fiicantahay xitaa kumbuyuutarka ugu casrisan ee hawlaha qaarkood oo ku lug leh ka shaqeynta sawirrada, video, codka, iyo qoraalka. Cilmi-baarayaasha kombiyuutarada ee ka shaqeynaya kuwan adag ee kombuyuutarrada-u-fudud-u-shaqeeynta aadanaha waxay xaqiiqsadeen in ay ku jiri karaan bini'aadamka nidaamka xisaabinta. Halkan waxaa ah sida Luis von Ahn (2005) lagu sharaxay xisaabinta bini'aadamka markii ugu horeysay ee uu ku qorey ereyga uu ku qoran yahay: "Muuqaal loo isticmaalo awoodda wax-qabad ee aadanaha si loo xalliyo dhibaatooyinka kombiyuutarrada aan xalin Karin." dareenka guud ee ereyga, eeg Law and Ahn (2011) .
Sida lagu qeexay qeexitaanka lagu soo jeediyay Ahn (2005) Foldit-kaas oo aan ku sharraxay qaybta taleefannada furan-waxaa loo tixgelin karaa mashruuc xisaabin bini aadan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan dooranayaa inaan uqoollo Foldit wicitaan furan sababta oo ah waxay u baahan tahay xirfado khaas ah (inkasta oo aan loo baahnayn tababarka rasmiga ah) waxayna qaadataa xalka ugu fiican ee la bixiyay, halkii la isticmaali lahaa istiraatiijiyad isku dhafan.
Ereyga "kala-qaybsan-isku-dhex-dhexaadin" ayaa waxaa isticmaalay Wickham (2011) si loo sharaxo istaraatiijiyadda xisaabinta tirakoobka, laakiin waxay si fiican u qaadataa geeddi-socodka mashaariic badan oo xisaabinta dadka. Istaraatiijiyada kala duwan ee la isku raacsan yahay ayaa la mid ah qaabka MapReduce ee laga sameeyay Google; Wixii dheeraad ah ee MapReduce, ka eeg Dean and Ghemawat (2004) iyo Dean and Ghemawat (2008) . Wixii intaa ka badan oo ku saabsan qaababka kale ee xisaabinta ee loo qeybiyey, fiiri Vo and Silvia (2016) . Cutubka 3aad ee Law and Ahn (2011) wuxuu ka doodayaa mashaariicda oo leh qaabab badan oo isku dhafan oo ka mid ah kuwa cutubkan.
In mashaariicda xisaabinta aadanaha ee aan ka hadlay cutubka, ka qaybqaatayaashu waxay ka warqabeen waxa dhacaya. Mashaariicda kale, si kastaba ha ahaatee, waxay doondoonaan in ay qabtaan "shaqo" oo horayba u dhacda (oo la mid ah eBird) iyo iyada oo aan ka warhayn ka qaybqaatayaasha. Eeg, tusaale, ciyaaraha ESP (Ahn and Dabbish 2004) iyo reCAPTCHA (Ahn et al. 2008) . Si kastaba ha noqotee, labadaba mashaariicdani waxay sidoo kale keenaan su'aalo anshax ah maxaa yeelay kaqaybgalayaashu ma garanaynin sida xogtooda loo isticmaalay (Zittrain 2008; Lung 2012) .
Waxaa soo raaca barnaamijka ESP, cilmi-baarayaal badan ayaa isku dayay in ay horumariyaan "ciyaaro kale oo leh ujeedo" (Ahn and Dabbish 2008) (Tusaale ahaan, "cayaaraha xisaabinta aadanaha ku salaysan" (Pe-Than, Goh, and Lee 2015) ) loo isticmaalo xalinta dhibaatooyin kale duwan. Maxay yihiin "ciyaaraha ujeeddada leh" ay wadaagaan waa inay isku dayaan inay hawsha ku lug leh xisaabinta dadka ku raaxeystaan. Sidaa awgeed, halka ESP-ga ay wadaagto qaabka isku-dhafan ee isku-dhafan ee Galaxy Zoo, waxay kala duwan tahay sida ka qaybgalayaashu u dhiirigeliyaan-xiisaha iyo rabitaanka cilmiga sayniska. Wixii faahfaahin dheeri ah ee ku saabsan ciyaaraha, fiiri Ahn and Dabbish (2008) .
Qeexitaankeyga Galaxy Zoo wuxuu barbar dhigayaa Nielsen (2012) , Adams (2012) , Clery (2011) , iyo Hand (2010) , iyo soo bandhigidda ujeedooyinka cilmi baarista ee Galaxy Zoo ayaa fududeeyay. Wixii intaas ka badan oo ku saabsan taariikhda galaxyada ku-sheegashada astronomy iyo sida Galaxy Zoo u socotid dhaqankan, fiiri Masters (2012) iyo Marshall, Lintott, and Fletcher (2015) . Dhisidda Galaxy Zoo, cilmi-baarayaashu waxay soo gabagabeeyeen Galaxy Zoo 2 taas oo soo ururisay in ka badan 60 milyan oo ah qaabdhismeedyo murugsan oo adag oo ka socda tabaruceyaasha (Masters et al. 2011) . Dheeraad ah, waxay ku darsadeen dhibaatooyin ka baxsan muraayadaha galaxyaxa, oo ay ka mid yihiin sahaminta dusha sare ee Moon, raadinta meeraha, iyo in la diiwaangeliyo dukumintiyadii hore. Maanta, mashaariicdooda oo dhan waxaa laga ururiyaa bogga Zooniverse (Cox et al. 2015) . Mid ka mid ah mashaariicda - Maqal-xajinta Serengeti-waxay bixisaa caddeyn ah in mashaariicda qaabaynta qaababka Galaxy Zoo ee noocyada muuqaalka ah loo samayn karo cilmi baaris deegaaneed (Swanson et al. 2016) .
Cilmi-baarayaasha ayaa qorshaynaya in ay isticmaalaan suuqa shaqada ee mikrotask (tusaale ahaan, Amazon Mechanical Turk) mashruuca xisaabinta aadanaha, Chandler, Paolacci, and Mueller (2013) iyo J. Wang, Ipeirotis, and Provost (2015) bixiyaan talo wanaagsan oo ku saabsan naqshadda shaqada iyo arrimaha kale ee la xiriira. Porter, Verdery, and Gaddis (2016) bixiyaan tusaalooyin iyo talooyin si gaar ah loogu soo jeediyay isticmaalka suuqyada xoogsiga macaamiisha loogu talagalay waxa ay ugu yeeraan "xog-ururinta." Xadka u dhaxeeya xog-ururinta xogta iyo ururinta xogtu waa wax aad u xun. Wixii dheeraad ah oo ku saabsan ururinta iyo isticmaalka calaamadaha barashada kormeerka ee qoraalka, fiiri Grimmer and Stewart (2013) .
Cilmi-baadhayaashu waxay xiiseynayaan abuurista waxa aan ugu yeeray nidaamyada xisaabinta bini'aadamka ee computer-ka caawiya (tusaale ahaan, nidaamyada isticmaala calaamadaha bani-aadamka si ay u tababaraan mashiinka wax lagu barto) waxay xiiseyn karaan Shamir et al. (2014) (tusaale ahaan adeegsiga codka) iyo Cheng and Bernstein (2015) . Sidoo kale, moodooyinka barashada mashaariicda mashaariicdaas waxaa lagu weydiin karaa wicitaano furan, taas oo cilmi-baarayaashu ay ku tartamayaan in ay abuuraan qaababka mashiinka wax-barashada mashiinka waxqabadka ugu weyn. Tusaale ahaan, kooxda Galaxy Zoo waxay u furtay wicitaan furan waxayna heleen hab cusub oo ka soo baxay mid ka mid ah horumarinta Banerji et al. (2010) ; Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa Dieleman, Willett, and Dambre (2015) .
Wicitaanada furan (qaybta 5.3)
Wicitaanada furan ma aha kuwo cusub. Dhab ahaantii, mid ka mid ah wicitaanada ugu caansan ee furan ayaa maraya 1714 marka Baarlamaanka Boqortooyada Ingiriiska uu abuuray Heerka Lacagta ee Longitude Prize for qof kasta oo horumarin kara hab lagu ogaado muddada badmareen ee badda. Dhibaatadu waxay soo xushay qaar badan oo ka mid ah saynisyahannadii ugu fiicnaa maalmihii, oo ay ku jiraan Isaac Newton, iyo xalka guulaysta ayaa ugu dambeyntii soo gudbiyay John Harrison, oo ahaa saacad-ilaaliye ka soo jeeday baadiyaha ka soo jeeday dhibaatada si ka duwan kuwa cilmi-baadhayaasha ah ee diiradda saara xal ; Wixii macluumaad dheeraad ah, fiiri Sobel (1996) . Sida tusaalahani muujinayo, hal sabab oo wicitaanada furan ayaa loo maleynayaa inay si fiican u shaqeynayaan waxay tahay in ay siiyaan dadka haysta aragti iyo xirfado kala duwan (Boudreau and Lakhani 2013) . Ka eeg Hong and Page (2004) iyo Page (2008) wax badan oo ku saabsan qiimaha kala duwan ee xalinta dhibaatada.
Kiisaska furan ee furan ee cutubka waxay u baahan tahay sharraxaad dheeraad ah sababta ay ugu tiirsan tahay qaybtan. Marka hore, hal dariiq oo aan kala soocayo xisaabinta bini'aadamka iyo mashaariicda furan ee furan ayaa ah in wax soo saarka ay tahay celcelis ahaan dhammaan xalka (xisaabinta dadka) ama xalka ugu fiican (wicitaan furan). Nidaamka Netflix waa wax aad u adag oo ku saabsan arrintan, sababta oo ah xalka ugu fiican ayaa u muuqday celcelis heer sare ah ee xalka shakhsi ahaaneed, hab lagu magacaabo xal looxyo (Bell, Koren, and Volinsky 2010; Feuerverger, He, and Khatri 2012) . Laga soo bilaabo muuqaalka Netflix, si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd inay sameeyaan dhammaantood waxay qabteen xalka ugu fiican. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heleysaa Bennett and Lanning (2007) , Thompson (2008) , Bell, Koren, and Volinsky (2010) , iyo Feuerverger, He, and Khatri (2012) .
Marka labaad, sharaxaadaha qaar ka mid ah xisaabinta aadanaha (sida, Ahn (2005) ), Foldit waa in loo tixgeliyaa mashruuca xisaabinta dadka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan doortaa in aan ucodo sida wicitaan furan sababta oo ah waxay u baahan tahay xirfado khaas ah (inkastoo aan loo baahnayn tababarka takhasuska ah), waxayna qaadataa xalka ugu fiican, halkii la isticmaali lahaa istiraatiijiyad isku dhafan. Wixii dheeraad ah Foldit fiiri, Cooper et al. (2010) , Khatib et al. (2011) , Andersen et al. (2012) ; sharraxaadkayga Foldit wuxuu barbar dhigey sharaxaadda Bohannon (2009) , Hand (2010) , iyo Nielsen (2012) .
Ugu dambeyntii, mid ayaa ku doodi kara in Peer-ilaa-Patent ay tusaale u tahay ururinta xog ururinta. Waxaan dooranayaa inaan ku daro wicitaan furan sababta oo ah waxay leedahay qaab dhismeed oo la mid ah tartanka oo keliya ayaa loo adeegsadaa, halka ay ku jiraan xog ururinta, fikradda faa'iidooyinka wanaagsan iyo kuwa xunba aan cadayn. Wixii dheeraad ah oo ku saabsan Peer-ilaa-Patent, fiiri Noveck (2006) , Ledford (2007) , Noveck (2009) , iyo Bestor and Hamp (2010) .
Marka la eego isticmaalka wicitaanka furan ee cilmi baarista bulshada, natiijooyinka la mid ah kuwa Glaeser et al. (2016) , ayaa lagu soo warramay cutubka 10aad ee Mayer-Schönberger and Cukier (2013) oo New York City ay awood u laheyd inay isticmaalaan qaabeynta saadaalinta si ay u soo saaraan guulo waaweyn oo wax soo saarka kormeerayaasha guryaha. Magaalada New York, moodooyinka saadaalinta ah waxaa dhisey shaqaalaha magaalada, laakiin xaaladaha kale, waxay ka fekeri karaan in la abuuri karo ama la horumarin karo wicitaanada furan (tusaale, Glaeser et al. (2016) ). Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah dareenka ugu weyn ee hababka saadaalinta ah ee loo isticmaalo in lagu qoondeeyo khayraadka ayaa ah in moodooyinkaasi ay leeyihiin awood ay ku xoojiyaan xuduudaha jira. Cilmi-baarayaal badan ayaa horey u ogaaday "qashinka, qashinka," iyo moodooyinka la saadaalinayo waxay noqon kartaa "dharbaaxo", "Fiiri Barocas and Selbst (2016) iyo O'Neil (2016) wax badan oo ku saabsan khataraha mashaariicda la saadaalinayo iyada oo xogta tababbareysa.
Hal dhibaato ah oo ka hortagi karta dawladaha in ay isticmaalaan xafladaha furan waa in tani ay u baahan tahay in la sii daayo macluumaadka, taas oo keeni karta xadgudubyo khaas ah. Wixii dheeraad ah oo kusaabsan asturnaanta iyo xog-bixinta wicitaanada furan, fiiri Narayanan, Huey, and Felten (2016) iyo wadahadalka cutubka 6aad.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khilaafaadka iyo isku midka ah ee saadaasha iyo sharaxaadda, eeg Breiman (2001) , Shmueli (2010) , Watts (2014) , iyo Kleinberg et al. (2015) . Wixii dheeraad ah oo ku saabsan doorka of saadaasha in cilmi bulsho, arki Athey (2017) , Cederman and Weidmann (2017) , Hofman, Sharma, and Watts (2017) , ( ??? ) , iyo Yarkoni and Westfall (2017) .
Si dib-u-eegis loogu sameeyo mashaariicda furan ee biology, oo ay ku jiraan talooyinka naqshadeynta, fiiri Saez-Rodriguez et al. (2016) .
Ururinta xog ururinta (qaybta 5.4)
Qeexitaankeyga eBird wuxuu ku faahfaahinayaa sharaxaadaha Bhattacharjee (2005) , Robbins (2013) , iyo Sullivan et al. (2014) . Wixii intaas ka badan oo ku saabsan sida cilmi-baarayaashu u isticmaalaan tusaalooyin xisaabeed si ay u falanqeeyaan xogta eBird eeg Fink et al. (2010) iyo Hurlbert and Liang (2012) . Wixii dheeraad ah oo ku saabsan qiyaasidda xirfadlayaasha ka qeybgalayaasha eBird, fiiri Kelling, Johnston, et al. (2015) . Wax badan oo ku saabsan taariikhda muwaadiniinta muwaadiniinta ah ee ku takhasusay, fiiri Greenwood (2007) .
Wixii intaas ka badan oo ku saabsan mashruuca Journals Malawi, fiiri Watkins and Swidler (2009) iyo Kaler, Watkins, and Angotti (2015) . Wixii dheeraad ah oo ku saabsan mashruuc la xiriira Koonfurta Afrika, fiiri Angotti and Sennott (2015) . Wixii tusaalooyin badan oo cilmi baaris ah oo la isticmaalayo xogta ka soo baxday Mashruuca Journals Journey (Malawi Journals Journals) eeg Kaler (2004) iyo Angotti et al. (2014) .
Qorsheynta adiga (qaybta 5.5)
Nidaamkaygu wuxuu ku bixiyaa talooyin naqshad leh wuxuu ku saleysnaa tusaalihii mashaariicda iskaashi ee guulaystay oo guuldaraystay ee aan maqlayey. Waxaa sidoo kale jira daraasad cilmi baaris ah oo lagu isticmaalo aragtiyo badan oo cilmi nafsiyeed oo bulshadeedka ah si loo dhiso bulshooyinka internetka ee ku habboon naqshadeynta mashaariicda iskaashiga ballaaran, eeg, tusaale ahaan, Kraut et al. (2012) .
Marka laga hadlaayo ka qaybgalayaasha dhiirigelinta, dhab ahaantii aad ayay u adagtahay si loo ogaado sababta ay dadku uga qaybgalaan mashaariicda iskaashiga ballaaran (Cooper et al. 2010; Nov, Arazy, and Anderson 2011; Tuite et al. 2011; Raddick et al. 2013; Preist, Massung, and Coyle 2014) . Haddii aad qorsheyneyso inaad ku dhiirrigeliso kaqeybgalayaasha lacag bixinta suuqa mikrotask (tusaale, Amazon Mechanical Turk), Kittur et al. (2013) waxay bixiyaan talo qaar.
Iyadoo laga yaabo inay la yaabi karto, tusaale ahaan tusaalooyin aan la fileyn oo ka imanaya mashaariicda Zooiverse, fiiri Marshall, Lintott, and Fletcher (2015) .
Marka laga hadlayo anshaxa, qaar ka mid ah hordhaca guud ee arrimaha ku lug leh waa Gilbert (2015) , Salehi et al. (2015) , Schmidt (2013) , Williamson (2016) , Resnik, Elliott, and Miller (2015) , iyo Zittrain (2008) . Arrimaha khuseeya arrimaha khuseeya arrimaha sharciga ah ee shaqaalaha badan, eeg Felstiner (2011) . O'Connor (2013) wax ka qabtaa su'aalaha ku saabsan kormeerka anshaxa ee cilmi-baadhista marka doorka cilmi-baarayaasha iyo ka-qaybgalayaashu ay dhibaan. Arrimaha la xidhiidha xogta la wadaagayo iyadoo la ilaalinayo ka qaybgalayaasha mashaariicda sayniska muwaadiniinta, fiiri Bowser et al. (2014) . Labada Purdam (2014) iyo Windt and Humphreys (2016) waxay leeyihiin dood ku saabsan arrimaha anshaxa ee ururinta xogta la qaybiyay. Ugu dambeyn, mashaariicda badankood waxay qirayaan deeqaha, laakiin ma siin karaan dhibco sawir leh ka qaybgalayaasha. Foldit, ciyaartoyda waxaa badanaa loo qoraa qoraa (Cooper et al. 2010; Khatib et al. 2011) . Mashruucyo kale oo furan oo furan, ayaa ku soo biiray guuleystayaashu waxay badanaa qori karaan warqad sharaxaysa xalalka (tusaale ahaan, Bell, Koren, and Volinsky (2010) iyo Dieleman, Willett, and Dambre (2015) ).